Ny praiminisitra Kroasia dia nosedraina ho an'ny COVID-19
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Kroasia » Ny praiminisitra Kroasia dia nosedraina ho an'ny COVID-19
Nanambara ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta Kroaty androany fa Andrej Plenkovic, praiminisitra Kroasia dia nanaporofo izany Coronavirus.
Ny quarantine 10 andro no natokana ho an'ny praiminisitra taorian'ny tazo somary malemy ny vadiny ary voasedra tsara Covid-19 amin'ny sabotsy. Nizaha toetra ratsy izy tamin'izany.
"Taorian'ny fanoloran-kevitr'ireo epidemiolojista, ny praiminisitra Andrej Plenkovic dia nanao fitsapana indray ny fisian'ny coronavirus ny alatsinainy teo, ary nivoitra ny fitsapana azy", hoy ny governemanta tamin'ny famoahan-gazety.
"Salama tsara izy amin'izao fotoana izao, ary ny praiminisitra dia manohy manao ny asany sy ny andraikiny avy any an-trano ary hanaraka ny torolàlana rehetra omen'ny dokotera sy ny epidemiolojista," hoy ny governemanta.
Seychelles Mahatonga Miseho amin'ny Virtual “WOW! Fihaonana an-tampon'ny fironana mampiantrano vahiny 2020 "
Horohoron-tany mahery no nanohina ny faritry ny sisin-tanin'i Chili-Arzantina